Izindaba - Izinzuzo zophaneli wokuhlukanisa
Izinzuzo zophaneli wokuhlukanisa
Izinzuzo: Ukuvela nokumiswa kwempendulo kungalawulwa.
Ukwehlukaniswa ifanele luhlobo lwesitsha sokuhlola ingilazi, ikakhulukazi sihlobene nefelen yokuhlukanisa esetshenziselwa ukuhlolwa kwamakhemikhali. Kubandakanya umzimba wamabhakede, ikhava yebhakede ehlanganisa umlomo ongaphezulu womzimba wamabhakede. Kufakwe i-piston enezindlela ezintathu echwebeni elingezansi lomzimba wamabhakede, futhi amachweba amabili e-piston axhumene ngokulandelana namapayipi amabili phansi. Ukusetshenziswa kwemodeli yokusetshenziswa kungenza inqubo yokusebenza yokuhlola ibe lula ukulawula nokunciphisa ukuqina kwabasebenzi. Lapho inani loketshezi oluzohlukaniswa likhulu, iziphuzo ezimbili ebhakedeni zingahanjiselwa kubhubhu phansi ngasikhathi sinye ngokuhambisa itiye lepiston ngaphandle kokushintsha isitsha. Kungenziwa kanye.
Njengomkhiqizi wefreyimu ehlukanisa ingilazi & umphakeli wemishini yezokwelapha nemishini, uHuida akakwazi ukunikeza amakhasimende kuphela izixazululo jikelele zemishini yaselebhu, kepha futhi ahlinzeke ngohlu oluphelele lwemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ezihlobene zama-glasswares aselebhu. Siyakwamukela ukuthumela uphenyo ukuthola eminye imininingwane.